XXIII Forqué Awards: _Munyori_ uye _The bookstore_. Uye mamwe mazita ezvinyorwa. | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Makwikwi neMubairo, Zviitiko, Noticias
Nezuro manheru mhemberero yekuendesa ye XXIII Forqué Mitezo of cinematography. Vakundi ex aequo Aive mafirimu maviri ane zvinyorwa zvekunyora zvine mukurumbira wakawanda: Munyori, naManuel Martín Cuenca, uye Chitoro chemabhukurakanyorwa naIsabel Coixet.
Isu tinotarisa aya mafirimu uye mamwe anogovera zvinyorwa zvemusoro wenyaya. Vese vakaongorora zvakasiyana siyana zvekugadzira, kusimudzira, nharaunda uye mavara anogona kutenderera mubhuku. Kune mamwe akawanda, asi aya ndeenhasi.
1 Munyori - Manuel Martín Cuenca (2017)
2 Chitoro chemabhuku - Isabel Coixet (2017)
3 Iyo Bhuku Mupepeti - Michael Grandage (2016)
4 Bhuku reMbavha - Brian Percival (2013)
5 Muverengi - Riccardo Gabrielli (2012)
6 Muverengi - Stephen Daldry (2008)
Munyori - Manuel Martín Cuenca (2017)
Con hukuru hwakakosha uye budiriro yeruzhinji, iyi nyaya ine nyeredzi Javier Gutierrez, iyo yakahwina zvakare mubairo waJosé María Forqué kubva kunepepanhau kuenda ku mashandiro akanaka emurume.
Alvaro anoda kuve munyori, asi zvese zvaanonyora ndezvekunyepa uye zvisina hunyanzvi. Iye anoshanda mune gweta muSeville uye hupenyu hwake hwakachena. Zviri Amanda, mukadzi wake, uya anotanga kunyora nekutenga zvakanyanya. Izvi zvinotungamira mukuparadzaniswa kwevaviri ava uye Álvaro anosarudza kunyora bhuku rakakura. Asi haagone nekuti haana tarenda kana fungidziro. Juan, mudzidzisi wake mumusangano wekunyora, anomubatsira kuongorora hwaro hwenyaya. Saka kusvikira zuva rimwe Vlvaro anoona kuti ngano yakanyorwa nezvazviri uye anotanga kunyengedza vavakidzani vake neshamwari kuti vagadzire nyaya yechokwadi inopfuura ingano.
Chitoro chemabhuku - Elizabeth Coixet (2017)
Co-kugadzirwa pakati Spain neUnited Kingdom. Iyo nyeredzi yeBritish cast inonyanya ine mazita senge Emily Mortimer naBill Nighy.
Mukupera kwema50s Florence Green anosarudza kuita kuti imwe yehope dzake huru dzizadzikiswe: kusiya London uye vhura chitoro chidiki chemabhuku mutaundi riri pamhenderekedzo yeBritish. Kushamisike kwake, danho iri richaburitsa maitiro ese pakati pevagari veguta.
Muparidzi webhuku - Michael Grandage (2016)
Kubva pane iyo 1978 National Book Award kuhwina bhuku Max Perkins: Mupepeti weGenius, de A. Scott Berg. NdiPChigadzirwa cheBritish chinotarisa Colin Firth, Judha Mutemo uye Nicole Kidman pakati pevamwe. Inotitaurira nhoroondo yenguva dze Max Perkins, anonyanya kuyemurwa bhuku muparidzi inoridzwa pano naColin Firth.
Perkins aive kumashure kweakanyanya vanyori vakakura vezana ramakumi maviri. Akagara akazvipira kusimudzira tarenda, aive mumvuri mukuru kuseri kwedzidziso nyeredzi senge F. F. Fitzgerald (Guy Pearce) kana Ernest Hemingway (Dominic West). Mune ino bhaisikopo anotarisa kuti sei Perkins akatanga kukwirisa tarenda uye chimiro chaTom Wolfe (Judha Mutemo), pamusoro pekuburitsa pachena inoshamisa nyaya yehukama naye nemukadzi wake.
Bhuku Mbavha - Brian Percival (2013)
Zvakare zvichibva paruzivo nemunyori Marcus zusak, iyo inotsanangura zvinoitika zve musikana wechiGerman Aive nemakore mapfumbamwe kubva panguva yaakapihwa kurerwa naamai vake kusvika pakapera Hondo Yenyika II. Iri nyeredzi Geoffrey kukasira-kasira, Sophie Nélisse uye Emily watson.
Muverengi - Riccardo Gabrielli (2012)
Kune vanoda Latin American cinema Ichi chigadzirwa cheColombia chinogona kukufadza. Nyora iyo Carolina Guerra, Diego Cadavid naCarolina Gómez.
Kutsvaga a Chakavanzika bhegi izvo zvakanyangarika uye izvo zvinonyanya kufadza kune wese munhu zvine zvimwe zvinotsanangurwa mune a ChiGerman chinyorwa. Ivo vaviri vehama vanovawana vanomanikidza mudzidzi wepayunivhesiti kuti adudzire. Ivo ndivo vega vanoziva chakavanzika chako, asi hapana zviripo sezvazvinoratidzika.
Muverengi - Stephen Daldry (2008)
Rimwe zita rinobva pa novel yakanyorwa negerman Bernhard Schlink. Ivo nyeredzi mariri Kate Winslet, akahwina iyo Oscar yeWakanakisisa Actress pachinzvimbo ichi, Ralph Fiennes y David kross pakati pevamwe.
Isu tiri kuGerman mushure meHondo Yenyika II uye michael berg (David Kross), mukomana ane makore gumi namashanu okuberekwa, anorasikirwa nehana achidzoka kubva kuchikoro. Hanna schmitz (Kate Winslet) mukadzi akakomba uye akachengeterwa uyo akaenzana nezera rake, anomubatsira uye anomutora kuenda naye kumba. Pakati pevaviri a rudo anodisisa uye akavanzika iyo inokanganiswa nekunyangarika kwaHanna. Makore masere gare gare Michael anosangana naye zvakare, asi mune mamiriro aangadai asina kumbofungidzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Makwikwi neMubairo » XXIII Forqué Awards: _Munyori_ uye _The bookstore_. Uye mamwe mazita ezvinyorwa.